Si fudud nidaameed iPhone Xiriirada in Outlook
> Resource > iPhone > Sida loo hagaagsan iPhone Xiriirada in Outlook
Hey guys waxaan lahaa cabatay HD ka soo baxay aniga iyo waxaan laga badiyay oo dhan xiriirada aan Outlook in ay ahaayeen syncing in aan telefoonka. Ma jiraa hab si aad u hesho xiriirada taleefanka si hagaagsan oo Outlook 2007? Waxaan arki fursad ay "saaray xiriir cusub abuureen iPhone in koox (WordPress) laakiin waxaa la grayed baxay Lugood. Caawimaad kasta waa laga qiimeeyaa sida aan runtii neceb lahaa in ay -isticmaale dhammaan dadka ay khuseyso kuwa .... Thanks. Derek.
Si loo hubiyo ammaanka aad xiriirka la leedahay, waxaad u baahan kartaa in aad nuqulka xiriirada iPhone in Outlook u gurmad. In this article, aan ka hadlo sida loo nuqul ka xiriirada ka iPhone in Outlook la Wondershare TunesGo Retro , habka ugu fudud ee dib ilaa xiriirada iPhone la Lugood . TunesGo Retro waa iPhone xiriir kala iibsiga si sahlan loo isticmaalo. Sidaa daraadeed, waxaad awood u wareejinta xiriirada aad xasuusta iPhone, iCloud, Exchange, Yahoo! iyo xisaab oo dheeraad ah si Muuqaalka 2003/2007/2010/2013 iyo Outlook Express ee kaliya 2 tallaabooyinka.
Isku day Wondershare TunesGo Retro si ay u gudbiyaan xiriirada iPhone in Outlook!
Hab fudud si ay u gudbiyaan xiriirada ka iPhone in Outlook
Tallaabada 1. Isku aad iPhone barnaamijka
First of dhan, rakibi TunesGo Retro on your computer iyo waxa maamula. Connect aad iPhone si aad u computer via cable USB ah. Marka uu ku xiran, TunesGo Retro ogaan doonaa iPhone si degdeg ah oo ay muujiyaan in uu furmo suuqa hoose.
Fiiro gaar ah: Si aad u isticmaasho TunesGo Retro in aad nuqulka xiriir ka iPhone in Outlook, aad u baahan tahay si loo soo dajiyo Lugood aad kombuutarka hore.
Tallaabada 2. dhoofinta iPhone xiriirada si Muuqaalka
In geedka buugga bidix, guji Xiriirada . In xidhiidh category, doortaan xiriirada xusuusta ee iPhone ama xisaab, sida iCloud. Tani waxay kor u soo Bixiyaa suuqa kala xiriir maamulka ah. Dooro xiriirada aad doonayay oo riix batoonka "Import / Dhoofinta". In ay liiska hoos-hoos, doortaan "Dhoofinta soo xulay Xiriirada" ama "dhoofinta Dhammaan Xiriirada". Ka dibna dooro "in Outlook Express" ama "in Outlook 2003/2007/2010/2013".
Inta lagu guda jiro geeddi-socodka, waxaa idinku waajib ah in aad hubiso in aad iPhone ku xiran TunesGo Retro. In labaad ah, hanaanka wareejinta waxaa dhammaan. Bal eeg, siday u fududahay in dajiyaan xiriirada ka iPhone in Outlook la TunesGo Retro. Log in aad mail Muuqaalka iyo waxa ay haatan u hubiso.
Isku day Wondershare TunesGo Retro hadda!
Daawo tutorial video sidii aad u hagaagsan iPhone xiriirada si Muuqaalka